Mpanamboatra sy mpamatsy fonon-tanana - China fonon-tànana fitsaboana China
Fonon-tanana nitrile azo esorina:
Fitaovana simika simika izy io. Izy io dia vita amin'ny acrylonitrile sy butadiene amin'ny alàlan'ny fitsaboana manokana sy ny fanatsarana ny formula.
Ny fofon'aina sy ny fiononana dia eo akaikin'ny fonon-tanana vita amin'ny latex, ary tsy hisy aretin-koditra. Ny fonon-tanana Nitrile dia novolavolaina tato anatin'ny taona vitsivitsy. Mandritra ny famokarana dia afaka mahatratra ny haavo 100 sy haavo 1000 izy ireo aorian'ny fanadiovana. Ny ankabeazan'ny fonon-tanana nitrile azo ovaina dia tsy misy vovoka.
Fonon-tanana Nitrile Blue Medical azo alefa
Ny fonon-tànana latsa dia karazana fonon-tànana, izay tsy mitovy amin'ny fonon-tànana mahazatra ary vita amin'ny latex. Izy io dia azo ampiasaina ho indostrialy, indostrialy, fitsaboana, hatsaran-tarehy ary indostria hafa, ary vokatra fiarovana ny tanana ilaina izany. Ny fonon-tànana misy lateks dia vita amin'ny lateks voajanahary ary mifanaraka amin'ny additives tsara hafa. Ireo vokatra dia manana fitsaboana manokana amin'ny endriny manokana ary mahazo aina. Ampiasaina betsaka amin'ny famokarana indostrialy sy fambolena, fitsaboana ary amin'ny fiainana andavanandro izy ireo.